Weeraro Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Bariga Iyo Bartamaha Dalka Afghanistan. – Calamada.com
Weeraro Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Bariga Iyo Bartamaha Dalka Afghanistan.
calamada September 22, 2018 1 min read
Cidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa weerardan oo ahaa kuwoo Saf ballaaran ah waxey ku qaadeen saldhigyo iyo fariisimo maleeshiyaatka Xukuumadda Kaabul ay ka sameysteen deegaano ka kala tirsan Wilaayada Baktika iyo Lowjar ee dalka Afghanistan.
Weerarka Kowaad waxey ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan la beegsadeen fariisin maleeshiyaatka Ridada Kaabul ay ka sameysteen deegaan hoostaga degmada Sar Xuudhah oo ka tirsan Wilaayada Baktika ee dhacda bariga dalkaasi.
Weerarkan oo ahaa mid qorsheysan waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday inka badan 14 ka tirsan maleeshiyaatka Murtad Ashraf Gani.
Isla gudaha deegaankan waxey sidoo kale ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan qarax miino ku burburiyeen gaari gaashaaman waxaana qaraxa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhawaad Shan askari oo ka tirsan maleeshiyaatka Xukuumadda Ridada Kaabul kuwaasi oo la socday gaariga qaraxa lagu burburiyay.
Weeraka kale oo isaguna ahaa mid qorsheysa waxey ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan la beegsadeen fariisin maleeshiyaatka Ridada Afghanistan ay ka sameysteen deegaanka Darwiish oo hoostaga magaalada Xarunta u ah Wilaayada Lowjar ee bartamaha dalka Afghanistan.
Weerarkan waxey ciidamada Mujaahidiinta ku dileen Labo askari mid kalane weey ku dhaawaceen.
Sidoo kale howlgal gaar ah oo ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan ka fuliyeen wadada xiriirisa magaalooyinka Kaabul Iyo Jalalabaad waxey ku dileen Xubin ka tirsan Sirdoonka ridada Kaabul saddex kalane weey ku dhaawacmeen.
Weeraradan ka kala dhacay Bariga iyo Bartamaha Afghanistan ayaa qeyb ka ah howlgalada Al-khandaq ee sida Tooska ah ciidamada Mujaahdiiinta Dhaalibaan kaga wadaan guud ahaan 34 Wilaaya ee uu ka koobanyahay dalka Afghanstan.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Booqashada Andalus Iyo Machadka Imaamu Shaafici.
Next: Qarax Ka Dhacay Duleedka Degmada Afgooye.